I-IPFS: Uhlelo Oluthuthukile Lwefayela olune-P2P neBlockchain Technology | Kusuka kuLinux
I-IPFS uthembisa ukushayela a Iwebhu esatshalalisiwe, ngoba iyi- Iphrothokholi ye-P2P hypermedia (Peer-to-Peer - Person to Person) eyenzelwe ukwenza ifayili le- iwebhu esheshayo, ephephile futhi evulekile ngokwengeziwe.
Igama layo linikezwe iziqalo zebinzana ngesiNgisi, I-Interplanetary File System, okusho ngeSpanishi ukuthi, Uhlelo Lwefayela Leplanethi, nokuthi empeleni iyi, uhlelo lwefayela oluthuthukisiwe nge Ubuchwepheshe be-P2P neBlockchain.
Njenge- I-Blockchain Technology, okungaziwa abaningi, I-IPFS esekelwa yiyo, kunjalo nakakhulu. Kepha yini okukhulunywa ngokwengeziwe kufayela le- inkambu yezobuchwepheshe, ngoba imele ukuguqulwa kwe-inthanethi, njengoba sazi namuhla.
Ngakho-ke I-IPFS, ingagcwalisa noma ibuyisele okwamanje Isidlulisilwazi se-Hypertext Transfer Protocol (HTTP), okuyiwona njengamanje, nasezingeni lomhlaba wonke, elenza ukudluliswa kolwazi efwini (iwebhu). Ngakho-ke, I-IPFS ihlose ukuguqula izenzo zamanje ze- Internet kusekelwe amaseva aphakathi nendawo kuwebhusayithi esatshalaliswe ngokugcwele ngaphansi Ubuchwepheshe be-P2P neBlockchain.
Ukuze ube yi- kusatshalaliswa uhlelo lwefayela, nezinkomba namafayela, angaxhuma wonke amadivayisi wekhompyutha nokuqukethwe kwedijithali, emhlabeni jikelele, ngohlelo olufanayo lwefayela.
1 I-IPFS: Uhlelo Lokuhlela Amafayela
1.1 Izici ze-IPFS
I-IPFS: Uhlelo Lokuhlela Amafayela
Kuye iwebhusayithi esemthethweni kunemininingwane eminingi ewusizo mayelana nobuchwepheshe obushiwo, futhi esizeni sayo esisemthethweni ku- GitHub. Kodwa-ke, phakathi kwezinto eziphawuleka kakhulu ezingashiwo ngakho okulandelayo:
Umgomo wayo ukwenza iwebhu isheshe, iphephe futhi ivuleke ngokwengeziwe.
Isebenzisa ubuchwepheshe bokubethela ezingeni lohlelo lwefayela.
Kuyisakhiwo esakhiwe ngokuphelele kusuka ekuqaleni.
Ivumela ukwenziwa kwezicelo ezisatshalaliswe ngokugcwele.
Luhlelo lwefayela lomhlaba wonke olusetshenziswayo lisebenzisa ubuchwepheshe be-FUSE.
Okuqukethwe okuxhumene nokusetshenziswa kwe-HASH kuqinisekisa ubuqiniso bayo.
Ihlanganisa ukusetshenziswa kobuchwepheshe, njengeBlockchain, iKademlia, iBitTorrent, neGit.
Iphrothokholi yokusabalalisa ye-Hypermedia, eqhutshwa ngokuqukethwe nobunikazi.
Inesevisi yokuqamba igama ebizwa ngokuthi, IPNS, okuwuhlelo lokuqamba amagama oluphefumulelwe yi-SFS.
Ukusebenza kwayo kufana neqhubu elilodwa elibi elishintshana ngezinto ze-git.
Kuyinto modular, ngoba isekela izingqimba eziningi zomsebenzi ngokusebenza okuhlukile nobuchwepheshe.
I-Dual web, okungukuthi, ikuvumela ukuthi ubuke amadokhumenti njengakuwebhu yendabuko, okungukuthi, ngendlela yakudala ye HTTPe «https://ipfs.io/<path>», noma ngendlela yesimanje kuziphequluli noma izinhlelo zokusebenza, ngendlela I-IPFS: «ipfs://URL» o «dweb:/ipfs/URI».
I-IPFS Kuyinto a kusatshalaliswa uhlelo lokufaka lokho kuqinisekisa i- ukutholakala unomphela wabo, ngokuvumela amakhophi amaningi kokuhlukile izindawo esekela inethiwekhi. I-IPFS ilawula ukuxhumana okususelwa kokuqukethwe okusingathwa, kufakwa esikhundleni se- igama (ikheli le-IP noma i-URL) njengoba kwenzeka manje, ukuhlinzeka nge- vimba imodeli yesitoreji kokuqukethwe okuphezulu, okunama-hyperlink akwazi ukubhalwa kokuqukethwe kwakho.
Futhi, sebenzisa Izihlonzi ze-IPFS ezixhunywe ku I-hash ye-Cryptographic kokuqukethwe, okuqinisekisa ngendlela ye-cryptographic, ukuthi imele okuqukethwe kwalelo fayela njengokwasekuqaleni, kuze kube ukuguqulwa kwalo okulandelayo, noma ngabe kuncane kangakanani. Lokhu kuletha njengenzuzo, ukuvikelwa kokuqukethwe ekukhohlisweni okungagunyaziwe, nokuwohloka kwayo, okungukuthi, ithanda ukungaguquguquki kokuqukethwe.
Ekugcineni, phakathi kwezinye izinto eziningi ezithokozisayo ngalobu buchwepheshe, iqiniso lokuthi inethiwekhi yenodi, kunciphisa noma kukhansela ukufinyelela kokwehluleka kokuqukethwe, ngoba uma ukuxhumana nokuqukethwe okusingethwe kunodi eyodwa yenethiwekhi kwehluleka, kungafinyelelwa kokunye. Futhi ngaphezu kwalokho, ku-IPFS ukuxhumana kuvame ukusebenza kahle kakhulu, ngoba ukudluliselwa ngamanodi amaningi ngasikhathi sinye kuyinto evunyelwe.
Ukulanda amafayela womthombo noma izifaki ze-cross-platform (iWindows, iMacOS neLinux) etholakalayo bese wenza inqubo yokufaka nokusetshenziswa kwezicelo zayo ezahlukahlukene, ungaqala ngokuthinta isixhumanisi esilandelayo: Ideskithophu ye-IPFS en GitHub.
Siyethemba ukuthi lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «IPFS», kusho ukuthini «Sistema de Archivos Interplanetario», futhi empeleni, okuthuthukile Isistimu yefayela ene-P2P neBlockchain Technology ngokusetshenziswa nobubanzi bomhlaba wonke, inentshisekelo enkulu nokusetshenziswa, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IPFS: Ifayela Elithuthukile le-P2P neBlockchain Technology
Ingabe lolu hlobo lobuchwepheshe seluvele luyasekelwa noma ezinhlelweni zeziphequluli zokulusebenzisa?
Sanibonani Luiguiok! I-IPFS ineklayenti layo ledeskithophu nezinye izinhlelo zokusebenza ukuzulazula nokufinyelela lobu buchwepheshe. Kuze kube manje akunakwenzeka ngeziphequluli zendabuko.
I-Photopea: enye indlela ye-Photoshop ongayisebenzisa kusuka kusiphequluli sakho osithandayo
Izinhlelo zeCanonical zokushintsha ingqikithi ku-Ubuntu 20.04